Fambara sy fitsaboana ny foza | Tontolo alika
La lagaly aretin-koditra io izay misy fiatraikany amin'ny karazana biby marobe, toy ny alika. Izy io dia mety hiteraka karazana mites isan-karazany, izay miparitaka amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo biby hafa na ireo zavatra voa. Raha tsy voatsabo tsara dia mety hisy vokany ratsy eo aminy.
Miankina amin'ny tototry ny mite no mahatonga ny aretina. Lava ny lisitra, na dia amin'ity fotoana ity aza dia hoferana ny hiresaka momba ireo kilasy telo mahazatra indrindra:
Mange sarcoptic. Fantatra amin'ny anarana hoe lagaly mahazatra, dia vokarin'ny mite Sarcoptes Scabiei ary io no matetika matetika amin'ny alika. Izy io dia miparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo biby hafa na zavatra voan'ny virus, ka miteraka mangidihidy mafy amin'ny hoditry ny alika, ary koa mena, mamontsina ary alopecia. Mety hiparitaka amin'ny olombelona izy io. Soa ihany fa azo sitranina izy io.
Mange demodectic. Fantatra matetika amin'ny hoe scabies mena, vokarin'ny mite io demodex canis. Ity parasy ity dia mitoetra maharitra amin'ny volon'ny alika ary mitranga tsy misy fanavakavahana rehefa ambany ny fiarovana ny alika na miaina anaty toe-piainana tsy madio. Amin'ity tranga ity dia mipoitra ity karazana hodi-kazo ity, izay misy akony amin'ny tarehy ny ankamaroany, na dia mety hiparitaka eran'ny vatana aza izy io. Tsy miparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisana izany, ka tsy misy atahorana ny olona rehetra miara-miaina amin'ilay biby.
Havoana Otodectika. Ny mite no mahatonga azy Otodectes Cynotis, izay manafika ny alika sy ny saka ary mihanaka amin'ny faritry ny sofina, ka miteraka otitis mahery. Izy io dia ampitaina amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo biby voan'ny aretina hafa, ka miteraka redness, mangidihidy mafy, fahasosorana ary fivontosana.
Amin'ireto tranga telo ireto dia mitovy ny soritr'aretina. Anisan'ireo fahita matetika hitantsika:
Rashes, mizana ary fery.
Ny fahalemen'ny ankapobeny ary, amin'ny toe-javatra tafahoatra, ny fahafatesana.
Raha mahatsikaritra ny mari-pamantarana bitika kely indrindra ao amin'ny alika isika dia tsy maintsy mankanesa any amin'ny veterinera avy hatrany. Hahafantatra ny fomba fitantanana ny fitsaboana sahaza azy izy, amin'ny fijerena ny karazana scabies sy ny toetran'ny alika (karazana, taona, aretina, sns.). Ny mitikaide am-bava, tsindrona, na loha-hevitra dia matetika voatendry, misy ivermectin, selamectin, moxidectin, na milbemycin oxime amin'ireo singa ao anatiny.
Ho fanampin'izany, azo inoana fa tsy maintsy mampiasa shampoo na vovoka manokana isika handroana ny biby, ary koa analgesika sy inflammations. Etsy an-danin'izany, raha misy ny honahona, dia homena fanafody manokana ny sofina. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy mifanaraka sy manaraka ny fitsaboana feno isika.
Afaka mandray fepetra fisorohana hisorohana an'io olana io izahay:
Fahadiovana tsara. Ny fanosorana isan'andro, ary koa ny fandroana isam-bolana sy sasany na roa volana, dia iray amin'ireo lakilena lehibe hisorohana ny aretin-koditra. Ilaina ihany koa ny fitazonana ny tontolo iaranao madio.
Aza mifandray amin'ny biby na zavatra voan'ny aretina. Amin'ny ahiahy kely indrindra amin'ny scabies amin'ny biby rehetra dia tsara kokoa ny tsy avelantsika hanatona ny alikantsika. Toy izany koa, mila mandositra ireo zavatra nilaza ianao fa mety voan'ny biby: loaka fisotro, vozon'akanjo, lamba firakotra sns.
Sakafo sahaza. Raha mitazona ny fiarovana azy ny alikantsika, dia hampihena be ny fahafahany mijaly noho ny mange demodectic.
Fandaharam-potoana fanaovana vaksiny. Ny fitazonana ny fandaharam-potoana fanaovam-baksiny ho an'ny biby fiompy sy ny fanaraha-maso matetika ary ny fanafoanana deworm dia ilaina mba hisorohana ny aretina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fambara sy fitsaboana ny hoditra
Ho avy ny ririnina, amboary ny alikao